Xai Yak Techonology: January 2012
Posted by Xai Yak at 18:37 No comments:
(1) ကျွန်တော်တို့ အားလုံး နှာချေ တဲ့အခါမှာ မျက်လုံးဖွင့်ပြီး ဘယ်လိုမှ ချေလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ
(2) လင်းပိုင်တွေဟာ အိပ်တဲ့အခါမှာ မျက်လုံးတစ်ဖက်ဖွင့်ပြီး အိပ်ကျပါတယ်
(3) နှစ်စဉ်တိုင်း နှစ်စဉ်တိုင်းမှာ မြွေကိုက်ခံရလို့ သေဆုံးတဲ့ လူအရေအတွက်ထက် ပျားတုပ်ခံရလို့ သေဆုံးတဲ့ လူအရေအတွက်က ပိုများပါတယ်
(4) ညာသန်လူတွေဟာ ဘ...ယ်သန်လူတွေထက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ကိုးနှစ် ပိုအသက်ရှည်ကြပါတယ်
(5) ကျွန်တော်တို့အားလုံး Queen Elizabeth I ကို မသိရင်တောင် ကြားဖူးကြမှာပါ ဘုရင်မကြီးဟာ လိုအပ်သည် ဖြစ်စေ မလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ သုံးလမှာ တစ်ကြိမ်သာ ရေချိုးပါတယ်တယ်။
(6) နာဇီခေါင်းဆောင်ဟစ်တလာဟာ သက်သတ်လွတ်စားသူဖြစ်ပြီး သူ့မှာ Testis (ဝှေးစေ့) တစ်လုံးသာ ရှိပါတယ်
(8) ဂေါက်သီးတစ်လုံးရဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ အစက်အပြောက်( အချိုင့်)ပေါင်း 336 ရှိပါတယ်
(9) သင် နှာချေတဲ့အခါမှာ ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းအား ပိတ်ဆို့မှု မဖြစ်စေရန် ဂရုစိုက်ပါ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင့်မျက်လုံးများ ကွဲထွက်သွားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်
(10) ပိုးဟပ်တစ်ကောင်အား ခေါင်းဖြတ်လိုက်မည်ဆိုပါက ဆယ့်ငါးရက်တိုင် ဆက်လက် အသက်ရှင်နေနိုင်ပါသည်၊၊ ထိုသို့သေဆုံးသွားခြင်းမှာလည်း ဆယ့်ငါးရက်တိုင် အစာမစားရသောကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်
(11) ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူတွေအားလုံး ဘေးချင်းယှဉ်ပြီးတန်းစီလိုက်ရင် ကမ္ဘာကို အပတ် 60 ပတ်မိ မှာဖြစ်ပါတယ်
(14) နေ ကနေ ကမ္ဘာကို အလင်းတန်းကျရောက်ရန်အချိန် 8 မိနစ် လိုအပ်ပါတယ် အဲဒါဟာ ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတော့ သင်ဟာ နေ၀င်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ 8 မိနစ်ကတည်းက နေ၀င်ပြီးသွားပါပြီ
(15) လူတွေစားသုံးနေကြတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ တစ်ခုထဲသောမပုပ်မသိုးနိုင်တဲ့ အစားအစာ ကတော့ ပျားရည်ဖြစ်ပါတယ်၊၊
(16) အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေထဲမှာ သရ(vowels)မပါဘဲ အရှည်ဆုံးသော စကားလုံးမှာ twyndylly ngs ဖြစ်ပြီး အမွှာစုံတွဲများ လို့အဓိပွါယ်ရပါတယ်
(17) ၀က်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊၊
(18) မေလ မှာမွေးတဲ့ကလေးတွေဟာ အခြားလမှာမွေးတဲ့ ကလေးတွေထက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် 200 grams ပိုလေးပါတယ်
(19) အက်စ်ကီးမိုး လူမျိုးတွေမှာ ဆီးနှင်း(snow)လို့အဓိပွါယ်ရတဲ့ စကားလုံးပေါင်း တစ်ရာကျော် ရှိပြီး (hello)ဟလို ဟူသောနှုတ်ခွန်းဆက်စကားလုံး မရှိပေ၊၊
(20) ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောလူဦးရေကို အယောက်တစ်ရာထိ အချိုးကျစွာ ချုံ့လိုက်မည်ဆိုပါက အာရှတိုက်မှ 57 ယောက်၊ ဥရောပတိုက်မှ 21 ယောက်၊ အမေရိကတိုက်မှ 14 ယောက် နှင့် အာဖရိကတိုက်မှ 8 ယောက် စီရှိမှာဖြစ်ပါတယ်၊၊ထိုအထဲမှ တစ်ယောက်တည်းကသာလျှင် ကွန်ပြူတာတစ်စုံကိုပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်၊၊
(21) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်လုံးအရွယ်အစားဟာ မွေးသည်မှ သေသည်ထိ တရွယ်တည်း ဖြစ်ပြီး ၊ နှာခေါင်းနှင့် နားရွက်မှာမူ ကြီးထွားမှုနုန်း ရပ်တန့်သွားခြင်းမရှိပေ
(22) အကယ်၍သင်သည် မိုးကြိုးပစ်ခံရပါက အပူချိန် 28000 ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ဖြင့်လောင်ကျွမ်း ခံရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုအပူချိန်မှာ နေမျက်နှာပြင်ထက်ပိုမိုသော အပူချိန်ဖြစ်သည်
(23) ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ငှက်များအားလုံးထဲမှ အပြာရောင်ကို မြင်နိုင်သောတစ်ခုတည်းသော ငှက်မှာ ဇီးကွက်ဖြစ်သည်
(24) ပုံမှန်အားဖြင့် တနေ့တာအတောအတွင်း အမျိုးသားများသည် စကားလုံး 2000 ကျော် ပြောပြီးချိန်တွင် အမျိုးသမီးများမှာ စကားလုံးပေါင်း 7000 ကျော်ပြောပြီးဖြစ်ပေသည်၊၊ (သြော်... မိန်းမ မိန်းမ )
(25) ပျားကောင်များသည် ပျားရည် တစ်ပေါင် ရရှိရန် ပန်းပွင့်ပေါင်း 2000 ကျော် ဖြတ်သန်း နားရောက်ရပြီး ခရီးမိုင်ပေါင်း 55000 ကျော် ပျံသန်းရပေသည်၊၊
(26) ခုန်ပေါက်ခြင်း(jumping) မပြုလုပ်နိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော နို့တိုက်သတ္တ၀ါကတော့ ဆင်ဖြစ်ပါတယ်
(27) ဂေါက်ရိုက်ကစားခြင်းကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက စကော့တလန်ပြည်မှ စတင် တီထွင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်၊၊သူတို့ဟာ အဲ့ဒီ ကစားနည်းကို " Gentlemen Only Ladies Forbidden " လို့ သတ်မှတ်ထားရာကနေ အင်္ဂလိပ်တွေက GOLF ဆိုပြီး စတင် ကစားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်၊၊also call Game Of Lazy Fallows
(28) ခြဘုရင်မတစ်ကောင်ဟာ နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်တိုင်အသက်ရှင်နေနိုင်ပြီး နေ့စဉ် ခြကောင်ရေ သုံးသောင်းထိ မွေးဖွားပေးနိုင်ပါတယ်၊၊
(29) သင်နှင့်အတူ မွေးနေ့တစ်နေ့တည်း ကျရောက်နေသူပေါင်းမှာ 10,000,000 (ဆယ်သန်း) ဖြစ်ပါတယ်
Posted by Xai Yak at 18:28 No comments:
ဆိုက်ကောင်းကောင်းလေးတွေကို သူများတွေကို မေးနေရရင် ကြာမယ်
နည်းပညာ.စီးပွားရေး လူမှုရေး .တော်တော်လေးစုံလင်ပါတယ် အောက်မှာကြည့်လိုက်ကြပါ။
Posted by Xai Yak at 12:11 No comments:
ကောင်မလေးတွေဟာ သူတို့ချစ်တဲ့သူတွေကို သိတဲ့အတိုင်း ချွဲနွဲ့တတ်ကြတယ်... အမျိုးမျိုးစိတ်စမ်းကြတယ်...
ဒါပေမဲ့ ယောင်လို့တောင် ခိုင်းတိုင်း လုပ်နဲ့နော်.... သုံးခါခိုင်းရင် တစ်ခါလောက်ပဲလုပ်ပေးသိလား၊ အဲ့ဒါတောင်သိပ်ချစ်လို့
လုပ်ပေးတာလို့ပြောနော်... ဒါတောင် သူတို့ကသေချာစဉ်းစားဦးမှာတဲ့.... တကယ်ချစ်လို့လုပ်ပေးတာလားဆိုတာ.... :)
မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့ကို သိပ်ဂရုမစိုက်တတ်တဲ့သူတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားတတ်လို့ပဲတဲ့... :)
ကောင်လေးတွေ ဘယ်လိုပဲ စတိုင်သစ်တွေထွင်ထွင်၊ ဘယ်လိုပဲ စမတ်ကျအောင်ဝတ်ဝတ် ကောင်မလေးတွေစိတ်ဝင်စားတာ
သူတို့ရဲ့ မျက်နှာပေါ်က ဆွဲဆောင်မှုတဲ့..... ( မျက်လုံး၊ နှုတ်ခမ်း၊ ) အကြည့်နဲ့ ဆုံတဲ့အခိုက်၊ သို့မဟုတ်၊ စကားပြောရင်
ရယ်ပြုံးပီး ဟာသဥာဏ်နဲ့ ပြောတတ်သူတဲ့... ကောင်မလေးတွေက စိတ်ဝင်စားလာပီဆိုရင်" ကြိုက်မရှက်" ဆိုတဲ့အတိုင်း
အတင်းလိုက် ရောတတ်တယ်.... အဲ့အချိန်မှာ "မကျူ"လို့ကတော့ "ငအူ"ဖြစ်ပီမှတ်.... တို့မြန်မာမိန်းကလေးတွေဟာ
သေလောက်အောင်ချစ်ပါစေ ကိုယ်ကစ"ချစ်တယ်"လို့မပြောဘူး။( သင့်ကို ချစ်နေတဲ့မိန်းကလေးရှိသလား )?????
သေချာပြန်စဉ်းစားနော်.. ရှိနေရင် အမြန်သာ"ချစ်ခွင့်"တောင်းလိုက်တော့ကောင်လေးရေ... :P
မိန်းကလေးတွေက လက်ဆောင်ပေးရင်ကြိုက်ကြတယ်ဆိုတာထက်.... သူတို့ ကိုယ်တိုင်ပြန်ပေးရတာကိုပိုနှစ်သက်တယ်တဲ့။
ချစ်သူရှိတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ ကျောင်းစာ၊ အိမ်စာ၊ အလုပ်၊ အစရှိသဖြင့် ဘာပဲလုပ်လုပ် အချိန်ပြည့်ချစ်သူကို
သတိယနေတတ်တယ်တဲ့.... ( ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့တော့တခြားစီနော် ) တူတို့မှာ.. လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရတာနဲ့
ဘီယာဆိုင်ထိုင်ရတာနဲ့၊ဘောလုံးပွဲကြည့်ရတာနဲ့၊ ဂိမ်းဆော့ရတာနဲ့ အလုပ်ကိုရှုပ်နေတာပဲ....
( မိန်းကလေးတွေဖက်ကကူပြောပေးတာနော် ) ဟိဟိ
ကောင်မလေးတွေက ကောင်လေးတွေကို ဒီလိုပြောလေ့ရှိတယ်.... ငါ့ကို (.......... ) က ကျူနေတယ်တဲ့....
အဲ့ဒါဆိုရင် အဲ့ကလေးမ ကောင်လေးကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီ။ :)
ဂျီတော့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အရင်ဆုံး စနှုတ်ဆက်တဲ့ကောင်မလေးဟာ သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားနေသူဖြစ်တယ်.... ( အမျိုးတွေပါဝူး ) ဟီးး
သူ့ကောင်လေးအကြောင်းချည်းပဲ ပြောနေပေမဲ့ သီးခံနားထောင်ပေးပါ။ သူပြောချင်တာသူ့ကောင်လေးအကြောင်းမဟုတ်...
ကောင်မလေးတွေမှာ အရမ်းကြီးကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်.... အဲ့ဒါကတော့ သင်ကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်..
အတွေးတွေချော်မနေနဲ့ဦးနော်.... ( ချစ်ဖူးသူတိုင်းသိကြတယ် ) :)
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ကိုချစ်မိပြီဆိုရင်၊ ( နှာခေါင်းမပါရင် -ျီးစားတယ် )ဆိုတာထက်ကို
Posted by Xai Yak at 09:31 No comments:
Posted by Xai Yak at 09:19 No comments:
ဘော်ဘော်တို့လေ ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေကိုဒီလို ကြွေအောင်ပြောလို့ရတယ်နော် ဟတ်ဟတ်
၁။ ငါ နင့်ကို ဒီလောက်ချစ်တာ....နင် ငါ့ကို နည်းနည်းပြန်ချစ်ရင် ငါသေပျော်ပါပြီဟာ....
၂။ နင် ထမင်းမချက်တတ်ဘူးဆိုလဲ ငါ့ဘေးနားမှာနေပြီး...ငါချက်တဲ့ ထမင်းကို နှစ်ယောက်အတူတူစားကြမယ်လေ....
၃။ ဒီကမ္ဘာမှာ နင့်မိဘတွေ ပြီးရင် နင့်ကို ငါ့လောက် ချစ်တာ ဘယ်သူရှိလဲ.......
၄။ နင်ကလဲ ရိုးလိုက်တာ...နောက်ဆို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ..ငါ့နောက်မှာပဲ နေနော်... သိရဲ့လား....
၅။ နင့်ရဲ့နာမည်က ငါ့နှလုံးသားထဲမှာ ရေးထွင်းပြီးသားပါဟာ...တခြားကောင်မလေးတွေကို စိတ်မ၀င်စားပါဘူး....
၆။ နင် အဲဒီမှာပဲ ရပ်နေနော်...ဘယ်မှ မသွားနဲ့... ငါ အခုလာကြိုမယ်....
၇။ နင်ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအမြဲ ကြားချင်တယ်..မှတ်ထားပေးနော်...
၈။ နင့်ကို ငါ့ရဲ့ ဘေးမှာ တစ်သက်လုံး အတူရှိနေစေချင်တယ်....
၉။ လောကကြီးမှာ ကောင်းတဲ့အရာမှန်သမျှ...ငါရသလို...နင့်မှာလဲ ရှိစေရမယ်....
၁၀။ နင် ငါ့အတွက် အ်ိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးသလို...ငါလဲ နင်လျှောက်မဲ့လမ်းကို ရှင်းလင်းပေးထားမယ်လေ...
၁၁။ နင့်ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ ငါ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အမှတ်တံဆိပ်ပဲနော်...ဘယ်သူမှ တရားမ၀င် နင့်ကို ပြောဆိုခွင့် မပေးနိုင်ဘူး....
၁၂။ နင်လိုချင်တာ...ငါ့မှာရှိရင် ကျိန်းသေ နင့်ကို ပေးမှာပါ....နင် ငါ့အနားက မထွက်သွားပါနဲ့နော်....
၁၃။ အခု မင်္ဂလာဆောင်စရိတ်တွေ သက်သာတယ်ကြားတယ်.... ငါတို့ မင်္ဂလာဆောင်ရအောင်...ငါ့ကိုလက်ထပ်ခွင့်ပေးပါ....
၁၄။ ဘ၀ဆိုတာ ဒီလောက် ရှည်လျားတာ... နင် ငါ့ကို သုံး လေး နှစ် စောင့်ခိုင်း တာ ဘာအရေးလဲ...
၁၅။ ငါကိုယ်တိုင် နင့်ကို ကံကောင်းခြင်းတွေ ပေးမယ်...တခြားသူတွေကို စိတ်မချပါဘူး....
၁၆။ မင်းတို့ ငါ့ချစ်သူကို အနိုင်မကျင့်ကြနဲ့နော်..ငါကလွဲလို့ မင်းတို့မှာ ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူး...
၁၇။ နင်စောင့်နေနော်...တနေ့ကျရင် ငါ့ကလေးရဲ့ မေမေ လုပ်ရမှာ....
၁၈။ နင့်ကိုယ်နင် သေချာ စောင့်ရှောက်ပါ...မဟုတ်ရင် နင့်ကို တစ်သက်လုံးစောင့်ရှောက်ခွင့် ငါ့ကို ပေးနော်...
၁၉။နင့်ကို သတိရတဲ့အခါ...ငါ နင့်ကို အမြဲရှာနေမိတယ်...
၂၀။ ငါ နင့်ကို ကံကောင်းခြင်းတွေ ပေးတာ...ဘယ်သူမှ တားလို့ မရဘူးဆိုတာ နင်သိလား....
၂၁။ ငါတောင် အပြစ်မတင် ရက်တဲ့ လူကို...ဘယ်သူက အနိုင်ကျင့်လို့ရမှာလဲ....
၂၂။ ဘယ်လို အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်...နင့်မှာ လက်ထပ်ချင်တဲ့သူရှိရင် ငါ့ကိုပြောပါ... ငါနင့်ကို စွန့်လွှတ်ပေးပါ့မယ်...
မှတ်ချက်... အထက်ပါ စကားများမှာ... မိမိတကယ်ချစ်သော မိန်းကလေးကို သာ ပြောရန်ဖြစ်ပါတယ်...
သူမသည် အလွန်လှ၏ ။
ချောမောလှပသော သူမ၏ ရူပါကား ကျွန်ုပ်၏ အာရုံကို သိမ်းသွင်းဖမ်းစားထား၏ ။
သူမကား စင်စစ်ဧကန် လှဘုရင်မပင်တည်း။
အရပ်၌ ရပ်တန့် ၍နေသူကား အသူနည်း?
အိုး....တပါးသော မိန်းမသား တစ်ယောက်ပင်တည်း။ အို လှပချောမောလိုက်သော
ငါကား အရူးပင်။ အစောက မိန်းမကား ယခု ဤမိန်းမသား၏ အလှတို့ နှင့်ယှဉ်ကား
ဤမိန်းမသာလျှင် အစစ်အမှန် လှနတ်မိမယ် ပင်တည်း။
အဘယ်သို့ သောအကြောင်းကြောင့် ငါ၏ အမြင်သို့ ဤတတိယမြောက် မိန်းမကား ၀င်လာအံ့နည်း?
အို စာဖတ်သူ........ဤမိန်းမကား ငါတွေ့ ဖူးသမျှ၌ အလှဆုံး ဖြစ်ပါပေသည် တကား။
အို ငါကား အမှန်ပင် အရူးတည်း။ အစောက နှစ်ယောက်ကား ဤတစ်ယောက်၏ ခြေရာမျှပင်
အရမ်းလှတဲ့ မိန်းကလေးတွေအများကြီးပဲဗျ။ များတာမှ တော်တော်များတာ။
ချောတာမှ မှုံနေတာပဲ။ နှစ်ခါမကလို့ သုံးခါတောင် လှည့်ကြည့်ချင်သွားမယ်။
ဒါပေမယ့် ကျုပ်ကတော့ သိပ်ဂရုမစိုက်။ တစ်ခါတော့ ကြည့်ဖြစ်သည်။
အေးပေါ့။ ဆယ်ခါကြည့်တော့လည်း ဟိုက ပြန်ကြိုက်မှာဆိုတော့ တစ်ခါပဲ ကြည့်တာပေါ့။
နှာဘူးကျနေတဲ့ ယောင်္ကျားတွေကို ပြောပါတယ်။ အလုပ်မရှိအကိုင်မရှိအချောအလှတွေ
ထိုင်ငေးနေတာ ရပ်လိုက်ပါလားလို့ အကြံပေးကြည့်ချင်တာပါ။
လောကမှာ မိန်းမ အပြင် အခြားအခြားသော စိတ်အပန်းဖြေရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
တာဝမှာ ဂျီတီစီမှာ ရှိပါတယ်။
အုပ်စုလိုက်တွေ အုတ်ခုံမှာ ထိုင်လို့ လာသမျှကို စကြ နောက်ကြ။
မှန်တယ်။ စိတ်အပန်းပြေတယ်။ ပျော်တယ်။
တစ်ခေါက်လောက်ကြည့်တာနဲ့ တစ်သက်လုံး အပန်းပြေသွားလား? တစ်သက်လုံးက
အရမ်းများလွန်းတယ်ထင်တယ်။ တစ်ရက်ပေါ့ တစ်ရက်လုံးလုံး ပျော်နေတယ်လား?
ကြည့်တယ်။ ခနခနကြည့်တယ်။ ကြည့်ပါများတော့ ပိုကြည့်ချင်လာတယ်။ ထပ်ကြည့်တယ်။
ရည်းစားရတယ်။ ထပ်ကြည့်သေးတယ်။ အော် မိန်းမယူတယ်။ ထပ်ကြည့်နေတုန်း။
ဘယ်အထိလဲ သေတဲ့ အထိပဲ။
မယုံမရှိနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်နေတာကို ပြောတာပဲ။
ကျုပ်ပြောချင်တာက မကြည့်နဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်လောက်ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
အလကား ကိုယ်လည်း တန်ဖိုးလျော့တယ်။ အကြည့်ခံတွေလဲ
"ကြည့်ပဲကြည့်တာ အသားပဲ့ပါသွားလို့ လား"
အသားတော့ပဲ့မပါဘူး။ အလိုရမ္မက်တွေတိုးပွားလာတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ
ပျက်ရွင်းလာတယ်။ စိတ်တွေ ဖောက်ပြန်ချင်လာတယ်။ ပစ်မှားချင်လာတယ်။
ရည်းစားမရှိလဲ သိပ်မကြည့်တာကောင်းတယ်။ ကျုပ်ပြောသလိုပဲ အကျင့်ဆိုးဆိုတာက
အသေးအဖွဲကြည့်တာလေးကို ဇာချဲ့ ပြီးပြောနေတယ်မထင်နဲ့ ။
မျက်လုံးနှစ်လုံးပါလို့ ကြည့်မိလို့ ပဲ မဟုတ်က ဟုတ်က ဇာတ်လမ်းတွေ
စဖြစ်တာ။ မကြည့်ရင် ဖြစ်စရာအကြောင်းကို မရှိ။
"မိန်းမတွေက ချောတော့ ယောင်္ကျားတွေက ကြည့်တယ်။ ဒါထုံးစံမယ်။"
"မင်းကသာပြောနေတာ သူတို့ က ငါတို့ မကြည့်မှာကိုတောင် စိုးရိမ်နေရင် နေမှာ။"
တယ်ဆိုတာ ငါတို့ ယောင်္ကျားတွေ ကြည့်အောင်ပဲကွ။"
"ယောင်္ကျားမှာ နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ နှာဘူးနဲ့ ဂန်ဒူးတဲ့။ အဲဒါမင်းသိလား။"
အဲလိုမျိုးတွေတော့ လာမပြောနဲ့ ဗျ။ ရိုးနေပြီမို့ လို့ ပါ။
ယောင်္ကျားမှာ နှာဘူးနဲ့ ဂန်ဒူးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ လူများ
လောကမှာ ပေါ့ပျက်ပျက်မိန်းမတွေ မွေးဖွားလာရတာက သူတို့ ကို ကြည့်မယ့်
ငန်းမယ့် ပေါ့ပျက်ပျက်ယောင်္ကျားတွေ ရှိနေတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပဲ။
အဲဒီ အထဲ စာဖတ်သူ မပါစေနဲ့ ။
လူလောကမှာ ကျင်လည်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်။ မြန်မာပြည်မှာနေနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့
တန်ဖိုးက ဘယ်မှရှိလဲဆိုတာ မြန်မာပြည်သားမှန်ရင်တော့ သိတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
အကျင့်စာရိတ္တလို့ ပြောရင်မမှားသလို...အိနြေ္ဒသိက္ခာဆိုပြန်ရင်လည်း မှန်နိုင်ပါတယ်။
အမြင်အာရုံတွေကို လွှဲလို့ ...
ဘ၀တိုးတက်ဖို့ ကိုပဲ ကြိုးစားကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
(မှတ်ချက် : လူအားလုံးအတွက် မရည်ရွယ်ပါ။ ရေးသမျှကို ထောက်ခံပါလို
့လည်းမပြောပါ။ စဉ်းစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပါ။)
Posted by Xai Yak at 21:33 No comments:
အိမ်ထောင်ပြုမည့်သူတို့ စဉ်းစားသင့်သည့် အချက်များ (၁၀ )
အိမ်ထောင်ပြုတော့မည့် စုံတွဲတို့သည် မိမိအိမ်ထောင်မပြုစဉ် အရင်စဉ်းစားရမည့် အချက်အလက်တို့ များစွာ
ရှိသည့်အနက် မိမိထင်မြင်ယူဆသည့် အဓိကကျသော အချက်အလက်တို့ကို တင်ပြချင်ပါသည်။
၄။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နားလည်မှုရှိရမည်။
ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တွင်တစ်ဦးက ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာစသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကို လုပ်ချင်သော်လည်း
ကျန်တစ်ဦးက မလုပ်ချင်၍ တားမြစ်ပိတ်ပင် ချောက်တွန်းမည်ဆိုလျှင် ကောင်းမှုကုသိုလ် လုပ်ချင်သောသူသည်
မျက်မှောက်တမလွန်နှစ်ဖြာလုံးပါ ဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရမည်မှာ သေချာပါသည်။
အထက်ပါ အချက်အလက်တို့ တူညီလျှင် မျက်မှောက်ဘ၀၌လည်း သာယာပျော်ရွှင်အောင်၊ စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်၊
အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေအောင် နေနိုင်မည့်အပြင် တမလွန်အတွက်လည်း ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်သောအခါ နှစ်ဦး
သဘောတူ ပြုလုပ်ရ၍ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုရရှိပြီး ချမ်းသာသုခမှန်သမျှတို့ကို မျက်မှောက်တမလွန် နှစ်ဖြာလုံး၌
ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုသည်ဆိုသည်မှာ မျက်မှောက်ဘ၀ကိုသာကြည့်၍ အိမ်ထောင်မပြုသင့်ပါ။
တမလွန်အတွက်ပါကြည့်ပြီး ရွေးချယ်သင့်ပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ စိတ်ထားမတူ၊ ဘာသာမတူ၊ ဘာသာရေး
လိုက်စားမှု မတူညီသောသူတို့ အိမ်ထောင်ကျလျှင် ထိုအိမ်ထောင်ရေးသည် မျက်မှောက်ဘ၀၌ ချမ်းသာစွာ
နေခဲ့ရလျှင်တောင်မှ တမလွန်ဘ၀အတွက် စိတ်အေးရမည် မဟုတ်ပေ။
ယခုခေတ်ကာလ၌ အိမ်ထောင်ပြုနေကြသူများကို လေ့လာကြည့်သောအခါ ငွေကြေးဥစ္စာနှင့် ရာထူးဂုဏ်သိက္ခာ
တို့ကို ကြည့်၍လည်းကောင်း တဏှာကို ဦးစားပေး၍လည်းကောင်း အိမ်ထောင်ပြုနေကြ သည်က များနေသည်ကို
တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အိမ်ထောင်ပြုကြသူတို့သည် အသိဉာဏ်ဗဟုသုတ နည်းပါးသောကြောင့်လည်းကောင်း၊
ဘာသာရေးစိတ်ဓာတ် နည်းပါးသောကြောင့်လည်းကောင်း မိုက်မဲစွာဖြင့် အိမ်ထောင်ပြုကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု
ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တွင် အနည်းဆုံးတူညီရမည့် အချက်တို့မှာ စိတ်သဘောထား၊ ဘာသာနှင့် ဘာသာရေး
လိုက်စားမှု၊ နားလည်ပေးမှုတို့ရှိမှသာလျှင် မျက်မှောက် တမလွန်နှစ်ဖြာလုံး၌ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ချမ်းသာစွာဖြင့်
မိမိသည် ယခုအခါ လူ့ဘ၀ကို ရရှိနေသောကြောင့် ယခုဘ၀ထက် တမလွန်ဘ၀ကို ဦးစားပေး၍ ဘယ်ကိစ္စမဆို
ပြုလုပ်ရပါလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယခု မိမိသည် လူ့ဘ၀ကို ရရှိနေပြီးဖြစ်သည့် အတွက် ထမင်းမစားရ
လို့ ငတ်သေရင်တောင် အကုသိုလ်မလုပ်မိပါက စိုးရိမ်ပူပန် ကြောက်လန့်စရာ မရှိပါ။ နောင်ဘ၀တွင် အကုသိုလ်
မကောင်းမှု မရှိသောကြောင့် ကောင်းသောဘ၀မှာဖြစ်ရပြီး ကောင်းကျိုးများကို ခံစားရမည်မှာ သေချာပါသည်။
ထို့ပြင် မိမိသည် အရင်ဘ၀က ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိခဲ့သောကြောင့် အသိဉာဏ်ရှိသော လူ့ဘ၀မှာ ရောက်လာပြီး
ဖြစ်သည့်အတွက် ဒီဘ၀သည် နောက်ဘ၀လောက် ပူပန်းစရာ မလိုပါ။
နောက်ဘ၀မှာ မိမိသည် ဒီထက်နှိမ့်တဲ့ ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၊ အသူရကာယ်ဆိုသည့် အပါယ်လေးဘုံများ
ရောက်မည်လား၊ ဒီထက်မြင့်သည့် နတ်ဘုံ၊ ဗြဟ္မာ့ဘုံများ ရောက်မည်လားဆိုတာ မသေချာသေးပါ။
ထို့ကြောင့် ယခုရနေတဲ့ လူ့ဘ၀အတွက်ထက် နောက်ဘ၀ကောင်းစားအောင် ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရန်
တတိယအိမ်ထောင်ရေး—- ကိုယ်ချစ်တဲ့လူရဲ့အကျင့်၊ သူ့ရဲ့ဘက်ဂရောင်း(ဆွေမျိုးသားခြင်း)နဲ့ လက်ထပ်တာဖြစ်တယ်။
ဒီလောကကြီးမှာ ဆံဖြူသွားကျိုးတဲ့အထိ ချစ်နိုင်ကြတဲ့လူတွေဟာ အခြေခံအားဖြင့် ဘဝမှာ(၃)ကြိမ်
ပထမတစ်ကြိမ်က စားသောက်ဆိုင်မှာ၊ ဆိုင်ကြီးကနားမှာ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့
ဆုမွန်ကောင်းတွေကြားမှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်တာဖြစ်တယ်။
ဒုတိယအကြိမ်က အိမ်မှာလက်ထပ်တာဖြစ်တယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သဟဇတဖြစ်အောင် တစ်ဘက်သားရဲ့
တတိယအကြိမ်က အမျိုးတွေကြားမှာ လက်ထပ်တာဖြစ်တယ်။ တစ်ဘက်သားရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့
ဒုတိယအကြိမ်နဲ့ တတိယအကြိမ်လက်ထပ်တာက ပထမအကြိမ်နဲ့ လုံးဝကွဲပြားတယ်။ အဲဒီလက်ထပ်ပွဲတွေမှာ
မင်္ဂလာအဆောင်အယောင်တွေ မပါသလို၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့ ဆုမွန်ကောင်းတွေမပါခဲ့ဘူး။ အခမ်းအနား
အခုခေတ် လူအများရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက လက်ထပ်ပြီး နှစ်တိုတိုအတွင်းမှာ ကွာရှင်းကြတယ်။
ကွာရှင်းကြတဲ့အကြောင်းရင်းကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် ကိုယ်လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ ပထမအကြိမ်ကို ဒုတိယအကြိမ်ထိ
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ရေနွေးဆူဆူက ပိုးမွှားတွေကို သတ်ပစ်နိုင်သလို အချိန်မြင့်တဲ့အချစ်ဒီဂရီက ချစ်သူရဲ့
ချစ်နေတဲ့အချိန်မှာ မမြင်ခဲ့မိတဲ့ အားနည်းချက်၊ မပြည့်စုံမှုတွေက လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုတဲ့ မပူ၊ မအေးတဲ့
ရေထဲရောက်သွားတဲ့အခါ အဲဒီအားနည်းချက်နဲ့ မပြည့်စုံမှုတွေက ပိုးမွှားတွေလိုပြန်ရှင်သန်လာတတ်တယ်။
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဒုတိယအကြိမ်လက်ထပ်ခြင်းကို ကိုယ်ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ သူ့အကျင့်နဲ့လက်ထပ်မယ်၊
သူရဲ့အားနည်းချက်နဲ့ မပြည့်စုံခြင်းတွေကို နားလည်ခွင့်လွတ်ပေးမယ်၊ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် အိမ်ထောင်ရေးက
အမြစ်ပါးသွားတဲ့သစ်ပင်လို တဖြေးဖြေး ကျူံ့ဝင်ခြောက်ကပ်သွားနိုင်တယ်။ အရမ်းချစ်ပြီး ယူထားကြသူနှစ်ဦး
က နှစ်တိုတိုလေးအတွင်းမှာ ကွာရှင်းကြတာဟာလည်း ဒုတိယအကြိမ် လက်ထပ်ခြင်းဆီ
ဒုတိယအကြိမ် လက်ထပ်ခြင်းထဲ ဝင်ရောက်နိုင်သူနှစ်ဦးက “ကွာရှင်းမယ်”ဆိုတဲ့စကားကို အပြောနည်းသွား
တတ်တယ်။ သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ တစ်ဘက်သားရဲ့ အကျင့်စရိုက်နဲ့မပြည့်စုံမှုတွေကို နားလည်လက်ခံထားလို့ဖြစ်တယ်။
တစ်ခါတလေ တစ်ဘက်သားရဲ့ ဒီလိုမပြည့်စုံမှုက ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်မှုအသွင် ပြောင်းစေခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ အိမ်ထောင်ရေးက ချိုမြိန်နွေးထွေးနေပြီး အချင်းချင်း နားလည်ခွင့်လွတ်ခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေပါ
လိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ရေးနွေးထွေးတာနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတည်မြဲပြီလို့ ယူဆလို့မရနိုင်သေးဘူး။ အိမ်ထောင်ရေး
တည်မြဲဖို့ တတိယအကြိမ်လက်ထပ်ခြင်းကို အရောက်တက်လှမ်းနိုင်ရဦးမယ်။ အဲတာက တစ်ဘက်သားရဲ့
တစ်နည်းပြောရရင် သူ့အပေါ်ထားတဲ့ ကိုယ်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ သူ့မိဘ၊ သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းဆီအရောက်
ဖြန့်ကျက်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးမှာ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် အသိဥာဏ်တွေကိုပေးတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့တစ်ခြမ်းကို ကိုယ်ပဲပိုင်ဆိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကို သူ့မိဘ၊ သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်း ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ အိမ်ထောင်ရေးကတည်မြဲပြီး ခွဲချင်တယ်ဆိုရင်တောင် မလွယ်တကူ မခွဲနိုင်တော့ပါဘူး။
ချစ်ခြင်းလောကမှာ ယောက်ျားအများစုက အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ မိန်းမတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ယူလိုက်တာပဲ
လို့ ထင်မှတ်ကြတယ်။ အဲဒီမိန်းကလေးရဲ့ လိုအင်နဲ့ သူ့ရဲ့နောက်ခံဘက်ဂရောင်းကို လျစ်လျူရှူထားတတ်ကြတယ်။
မိန်းကလေးအများစုကလည်း အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်တာလောက်ပဲသိခဲ့ပြီး
အဲဒီယောက်ျားရဲ့အကျင့်၊ စရိုက်နဲ့ သူ့ရဲ့နောက်ခံဘက်ဂရောင်း ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့လည်း လက်ထပ်ရမယ်ဆိုတာ
မူရင်းရေးသားသူ– Liu Yanmin (刘燕敏)
(ဒီနေရာမှာ စာရေးဆရာရဲ့စာတွေတသီကြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်)
Posted by Xai Yak at 21:31 No comments:
Posted by Xai Yak at 21:27 No comments:
iOS 5.0.1 အတွက် JailBreak Tool က ဒီနေ့ပဲ ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ A5 အသုံးပြုထားတဲ့ device တွေ အတွက်တော့ မရသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ iOS 5.0.1 တွေကို Jailbreak လုပ်နိုင်သွားတဲ့ Tool ကတော့ redsn0w 0.9.10 ပါ။ Tethered Jailbreak လုပ်ထားသူများ အတွက် Cydia ကနေ Corona package ကို ထည့်သွင်းပြီး Untethered ဖြစ်သွားအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ iOS 5.0.1 ထည့်ထားပြီး Jailbreak လုံးဝမပြုလုပ်ရသေးသူအတွက်ကတော redsn0w 0.9.10 ကို download ဆွဲပြီး အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
1. redsn0w 0.9.10 ကို http://www.mediafire.com/?gz86866z6960qxe ကနေ download ပြုလုပ်ပါ။
2. redsn0w ကို Run as Administrator အနေနဲ့ run ပါ။
3. redsn0w ပွင့်လာရင် Extras ကို နှိပ်ပါ။
4. Select IPSW ကို ရွေးပြီး iOS 5.0.1 Firmware ကို ရွေးချယ်ပေးပါ။ ပြီးရင် Back ပြန်နှိပ်ပါ။
5. Jailbreak ကို နှိပ်ပါ။ Install Cydia ကို အမှန်ခြစ်ပြီးရင်တော့ Jailbreak စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Xai Yak at 21:25 No comments:
Ram အပြည့်မပေါ်တာကို Windows အသုံးပြုတဲ့လူတွေမှာ ကြုံတွေရမှာပါ။ ဒီမှာ 32 bit နဲ့ 64 bit ဆိုပြီး
WINDOWS မှာ ရှိတာကိုလဲ သတိထားမိကြမှာပါ။ Windows 32 bit မှာတော့ သိကျတဲ့အတိုင်းဘဲ RAM ကို4GB အထက်ထည့်လို့မရပါဘူး။ ထည့်လဲဘဲ ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ 64 bit မှာကျတော့
ဆိုတော့ windows7ရဲ့ 64bit မှာ အပြည့်အသုံးပြုချင်ရင်
Run မှာ msconfig လို့ရပြီး Ok
window တခုပေါ်လာပါမယ် ပြီးနောက် Boot ဆိုပြီး အပေါ်မှာရှိတာကို နှိပ်ပါ
ပြီးနောက် Advanced Options ကိုနှိပ်ပါ။
Maximum Memory ကို အမှန်ခြစ်ထားတာကို ဖျတ်လိုက်ပါ
ပြီးနောက် Apply ပြီးတော့ ok
Computer ကို Restart လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်မှာ ရှိတဲ့ laptop တခုကိုလဲ လုပ်လိုက်တာ
8 GB Ram အပြည့်သုံးလို့ရပါတယ်။
Posted by Xai Yak at 21:24 No comments:
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ တခါစမ်းပါသေးတယ်.
Posted by Xai Yak at 21:21 No comments:
င့ါလက်သည်းတွေ ရှည်လာတိုင်း အမြဲ
ငါစာမေးပွဲတွေမှ အဆင့်ကျတိုင်း အမြဲ
င့ါတို့ ပညာတွေစုံကာမှ ဘ၀
မှတ်ချက်။ ။ 2014 ဖေဖော်ဝါရီလကိုစောင့်မျော်နေလျက်ပါ ချစ်သူ.....
Posted by Xai Yak at 17:15 No comments: